Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jaban ee Japan » Japan ayaa soo afjari doonta xaaladda degdegga ah ee COVID-19 toddobaadkan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Jaban ee Japan • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dowladda Japan ayaa si kastaba ha ahaatee la sheegay inay ka fiirsaneyso inay u oggolaato guddoomiyaasha inay hirgeliyaan tallaabooyinka COVID-19 ee bisha ka dib markii xayiraadaha jira ay dhacayaan.
Xaaladda shanaad ee Japan ee xaaladda degdegga ah ee COVID-19 ayaa ahayd tii ugu dheerayd ee soo marta masiibada.
Ra'iisul wasaaraha Japan ayaa sheegay in dowladdiisu ay go'aan rasmi ah gaari doonto fiidnimada Talaadada.
Xaaladda degdegga ah ee COVID-19 ayaa hadda daboolaysa Tokyo iyo 18 degmo oo dalka oo dhan ah.
Dowladda Japan ayaa la filayaa inaysan kordhin doonin xaaladda degdegga ah ee COVID-19 oo dabooli doonta Tokyo iyo 18 degmo oo dalka oo dhan ah marka uu dhammaado dhammaadka Sebtember, ilo wareedyo dowladda ayaa sheegay Isniintii.
Xaaladda degdegga ah ee shanaad ee qaranka, oo markii ugu horreysay lagu dhawaaqay afar degmo bishii Abriil, ayaa ahayd tii ugu dheerayd. Waxaa lagu ballaariyay 25 degmooyin oo dheeri ah ka hor inta aan la qaadin bishii Juun dhammaantood marka laga reebo Okinawa. Amarka ayaa mar labaad lagu soo rogay Tokyo bishii Luulyo, si kastaba ha ahaatee, ka dib markii dib -u -soo -nooleynta ay bilaabatay inay ka soo baxdo caasimadda intii lagu jiray dabayaaqadii Juun.
Waddanka Raiisel wasaare Yoshihide Suga wuxuu u sheegay wariyeyaasha in dowladdiisu ay go'aan rasmi ah gaari doonto fiidnimada Talaadada ka dib wada -hadallo ay la yeelatay khubaro cudurrada faafa oo ka socda guddi -hoosaadka coronavirus -ka ee dowladda dhexe.
Si kastaba ha noqotee, Suga wuxuu raaciyay inay lagama maarmaan tahay in si tartiib tartiib ah loo fududeeyo xannibaadaha COVID-19.
If JapanXaaladda deg-degga ah, oo hadda ka hawlgasha 19 degmo, ayaa gabi ahaanba kor loo qaaday, waxay noqon doontaa markii ugu horreysay tan iyo horraantii Abriil oo aan jirin degmooyin ka hooseeya xannibaadaha ay dowladdu u xilsaartay COVID-19.
Illaa iyo hadda, mid ka mid ah 19 -ka degmo ma codsan in la kordhiyo xaaladda degdegga ah.
"Waxay umuuqataa inay dowladdu awood u yeelan doonto inay kor u qaaddo xaaladda degdegga ah sidii loo qorsheeyay dhammaadka bisha," ayuu yiri wasiirka caafimaadka Norihisa Tamura intii lagu jiray barnaamij telefishan Axaddii.
In kasta oo kiisaska cusub ay hoos u dhacayaan, Tamura wuxuu uga digay dadweynaha inaysan hoos u dhigin ilaaladooda iyagoo ka baqaya inay sababaan dib u soo noqoshada jiilaalka. Wuxuu intaas ku daray in xannibaado kala duwan, oo ay ku jiraan saacadaha shaqada oo yaraaday maqaayadaha iyo baararka, ay tahay in si tartiib tartiib ah loo nasto, mas'uuliyiintuna waa inay xoojiyaan awoodda daryeelka caafimaadka - iyagoo u samaynaya tas -hiilaad dheeri ah bukaannada buuxdhaafay iyo soo iibinta shaqaalaha caafimaadka, iyo waxyaabo kale - si loogu diyaargaroobo cudurka dillaaca xiga.
Toddobaadkii hore, JapanTzar-ka tallaalka Taro Kono ayaa ku dhawaaqay in waddanku bilaabi doono maamulidda tallaallada xoojinta COVID-19 shaqaalaha caafimaadka dhammaadka sannadka, iyo dadka waayeelka ah sannadka cusub.
Laga bilaabo Isniinta, qiyaastii 52% dadweynaha Japan ayaa qaatay laba qiyaasood oo ah tallaalka COVID-19.